शारीरिक सम्बन्ध राख्दाराख्दै कसैले देख्यो ? अब पिर नगर्नुहोस् « Naya Bato
शारीरिक सम्बन्ध राख्दाराख्दै कसैले देख्यो ? अब पिर नगर्नुहोस्
के तपाईं आफ्नो अफिसमा कसै सँग सेक्स गर्दा गर्दै पक्राउ पर्नु भा छ ? या कुनै रात तपाईं आफ्नो प्रेमी सँग माया प्रेम र सेक्सको कुरा गर्दा गर्दै बाबा आमाले सुन्नुभएर खुब गाली खानु भा छ ? या कतै चोक चौतारो वा कुनामा आफ्नो प्रेमिलाई किस गर्दगर्दै आन्टी वा कसैले देखेको छ ? त्यसो हो भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, यस्तो अवस्था जसकसैलाई पनि पर्न सक्छ र प्राय तपाईं हामी सबैको जीवनमा यस्तो घटना घटेकै हुनेगर्दछ । कसैले देख्योकी भनेर टेन्सन लिइरहनु भन्दा बिर्सनु नै ठीक हुन्छ ।
यौन चिकित्सकहरु भन्छन सेक्स लाइफमा घटेका यस्ता साना तिना घटनाहरुका बारेमा धेरै समय टेन्सन लिएर बिल्कुल बस्नु हुँदैन । बरु उक्त समयमा आफ्नो प्रेमीप्रेमिका लाई आफ्नो अङालोमा कसेर विश्वास जगाउनु पर्दछ । किनकी यस्ता लाज लाग्ने पलहरुमा राम्रो सँग सम्हालिन सकियो भने उक्त विश्वास र भरोसाको आधारले तपाईं प्रती आफ्नो जीवन साथीको आकर्शण बढ्छ र पारिवारिक जीवन सफल बनाउन महत्व पुग्दछ ।
ल आउनुहोस् पढौ तपाईंलाई निकै लज्जित तुल्याउने केही यस्ता सेक्स घटनाहरु र चिकित्सकका सल्लाह
तपाईंको आमा बाहिर जाने प्लान क्यान्सिल गरेर आउनु भो ?
म राम पौडेल, एक विध्र्यार्थी हुँ । एक दिन मेरो बाबा आमा ३ दिनका लागि बाहिर घुम्न जादै हुनुहुन्थ्यो र यही मौका छोपेर म मेरो एक्स गर्लफ्रेन्ड लाई घरमा बोलाएर स्पेशल सेक्सी नाइट मनाउने पुरा तयारी गरेको थिए । उनलाई केही नौलो तरिकाले रमाइलो गर्न चाहन्थे । मेरो बाबा आमाको बेडरुम मेरो भन्दा ठुलो पनि थियो अनि गर्लफ्रेन्ड सँग सेक्स गर्न उक्त बेडरुम निकै उचित लाग्यो किनकी खाली पनि थियो । र कोठामा मैनबत्ती बाले, पर्फ्युम छर्के अनि अनि सोचे जब उनी आउछिन तब एटेच बाथरुममा बाथ पनि लिउला । म पुरा तैयार थिए, दिउसो जब बाबा आमा बाहिर जानु भो मैले गर्लफ्रेण्डलाई कल गरेर बोलाए अनि बाथरुममा हामी बिजी थियौ । हामी नग्न भएर यौनको चरम आनन्द लिने पोजमा तयार थियौ तर तेही समय आमा कोठा भित्र छिर्नु भयो तर हामी लाई पत्तै भएन,आमाले हामीलाई नाँगै पक्रिनुभयो । हत्तनपत्त अगाडि जे जे कपडा भेटेयौ बेरेर बाहिर निस्कियौ । तेस पछी ३ महिना सम्म घरमा मेरो बोलचाल नै भएन ।
यौन चिकित्सकको सल्लाह: यो नयाँ नयाँ लवर्स जोडिका लागि यो सामान्य कुरा होकी सेक्सका लागि नयाँ र नौलो टेस्ट लिने चाहना तर जब यस्तो अवस्थामा पक्राउ परिन्छ तब निकै अफ्ठ्यारो महशुस हुनेगर्दछ । जब बाबुआमाले यस्तो अवस्थामा देख्नु हुन्छ तब तपाईं सम्हालिएर सबै कुरा बताउन सक्नु पर्छ । त्यस समय केही सामान्य झगडा हुनसक्दछ तर केही समय पछी स्थिती सामान्य हुनजान्छ । मन भित्र आत्मग्लानी र मानसिक पिडामा बस्नु पर्दैन ।
फोन सेक्स गर्दा गर्दै तपाईंको बुवाले सुन्नु त भएन ?
यस्तै एक घटना घटेको छ १७ बर्से अनिता राणाको जीवनमा, उनले भनिन म मेरो ब्वाइफ्रेन्ड संग फोनमा मिठा मिठा कुरागर्दै थिए । रात अनी बन्द कोठा, सबै जना सुत्नुभएको थियो । हामी बिस्तारै बिस्तारै मिठा मिठा गफमा गफ्फिदै गर्दै सेक्सका कुरा हरु निस्कन थाले, हुँदा हुँदा हामी सेक्सका बारेमा खुलेर बातचित गर्न थाल्यौ । हामी एक अर्काका यौनांगका बारेमा बडो चाखका साथ निधिखुजी गरिरहेका थियौ ‘ठुलो सानो कालो गोरो’ । हामी यती मस्त थियौ कि ढोकामा बुवा आउनुभएको मलाई पत्तो भएन बुवाले सबै सुन्नु भयो, चर्को स्वरमा खुरुखुरु सुत भनेर जानु भयो । म आज सम्म बाबा सामु राम्रो सँग बोल्न सकेकी छैन , यस्तो लागेको थियो म अब मर्नु बाहेक अरु केही उपाय छैन ।
चिकित्सक सल्लाह: वास्तवमा फोन सेक्स राम्रो कुरा होइन, यसमा रमाइलो त होला तर यो निकै हानिकारक पनि हुन सक्छ । तपाईं यस्तो सेक्स प्रकियामा आफ्ना अंतरंग, शरीर, भित्री सेक्शुअल अंग हरुको प्रदर्शन एव बोली चाली प्रस्दर्शन गर्नु हुन्छ , तपाईंको अर्को साथीले यो सब रेकर्ड गरेको हुन सक्छ । यदी यस्तो भयो भने उसले आफ्ना अरु साथी हरुलाई उक्त रेकर्ड पठाउन सक्ने छ । त्यसैले यस्तो गर्नु भन्दा अगाडि हजार पटक सोच बिचार गर्नु बेस हुन्छ ।
तपाईंलाई कसैले सेक्स गर्दा देख्यो र ब्ल्याकमेल त गर्ने गरेको छैन ?
२४ बर्सिया सुनिता शर्माले आफ्नो अनुभव बताउदै भनिन, म एक पटक घरमा बाबा आमा बहिर गएको मौका पारी मेरो केटा साथीलाई घरमा बोलाए । घरमा मेरो ठुलि दिदी आर्को कोठामा सुत्नुभाको थियो, मैले उहाको कोठा बाहिर बाट लक गरिदिएको थिए । तर कसरी खुलेछ, मैले मेसो पाइन र दिदी अचानक मेरो कोठामा छिर्नु भयो । कोठामा नग्न अवस्थामा, हामी सेक्समा मस्त थियौ, मेरो साथी म माथि खप्टिएको थियो । दिदिले त्यो दिन देखी मलाई ब्ल्याकमेल गर्न शुरु गर्नु भयो । दिदिले भनेको हरेक कार्य मैले मान्नु पर्ने नत्र बाबा आमालाई पोल खोलिदिने धम्की दिन थाल्नु भयो ।
चिकित्सकको सल्लाह : यस्तो घटना घट्दा आफ्नो दिदी भाई या अरु कसैले देखेमा निकै समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । सबै भन्दा राम्रो उपाय के हो भने दिदी,बहिनी,भाई जो सुकै होस यस्तो कुरा सबैलाई खुलेर भन्नुपर्छ । यसरी कुरा खुलेर बताइयो भने तपाईंका आफ्ना दिदी भाई बहिनीले तपाईंको कुरा सहर्स स्विकार गर्न सक्छन र राम्रो मित्र बन्न सक्छन । यस्तो मा तपाईंले उनिहरु सँग माफि मागेर गलती गरे सरि भन्नु पर्दछ । र उनिहरुले तपाईं लाई सल्लाह दिन सक्छन र तपाईंका हरेक कृयाकलापमा नजर राख्न थाल्दछन् र अन्त्यमा तपाईंको निकै राम्रो दोस्त बन्न सक्दछन । जसबाट तपाईं हरु बिच नराम्रो सम्बन्ध हुन बाट जोगिनुहुनेछ ।
तपाईंको बेस्टफ्रेन्डको भाईले तपाईंलाई हेरिरहेको छ ?
स्टाफ नर्स पढ्दै गरेकी दिक्षा बस्नेतले आफ्नो एक अनुभव सुनाउदै भनिन, म एक दिन साथीको घरमा गएको थिए, त्यस दिन हाम्रो पोर्न फिल्म हेर्ने निर्णय भयो र हामी हेर्न थाल्यौ । म सेक्स भिडियो हेरेर पानी पानी भएको थिए र बाथ रुम जान निस्के । रातको समय साथीको घरमा सबै सुती सकेका थिए, म हतार हतारमा बाथ रुम छिरे अनी आफ्नो यौनाङ खेलाउन थांले । तर साथीको भाई निदाएको रहेन छ, उसले बाथरुमको ढोका बाट मलाई चिहाएर हेरेको रहेछ अनी आइफोनमा उसले मेरा सबै द्रिश्य खिचेको रहेछ । लगभग ३ महिना लगाएर बल्ल बल्ल अर्कै साथी लाई भनेर पैसा दिएर त्यो भिडियो डिलिट गर्न लगाए । मैले निकै नै मानशिक टेन्शन बेहोर्नु पर्‍यो ।
चिकित्सक सल्लाह: यदी तपाईं आफ्नो साथीको घरमा हुनुहुन्छ भने त्यस घरका सदस्य हरुको बारेमा निकै होसियार र चनाखो हुनु जरुरी हुन्छ । साथी तपाईंलाई यस्तो अवस्थामा कोही सानो बालकले देखेमा उसमा निकै नै नराम्रो असर पर्न सक्छ । यदी देखी हालेमा तपाईंले नर्मल व्यवहाँर गर्नु निकै नै आवश्यक हुन्छ किनकी त्यो बालकले यो कुनै खास कुरा हैन रहेछ भन्ने महशुस गरोस । यदी उक्त बालक तपाईं सामु निकै नै नराम्रो व्यवहारमा प्रस्तुत भएमा सम्झाउन सक्नु पर्दछ । किनकी बच्चाले उक्त कुरालाई लिएर अन्जानमा तपाईंको निकै ठुलो बेइजती गर्न सक्छन । सावधान रहनु आवश्यक हुन्छ ।
तपाईंको अफिस बोस टुप्लुक्क आइपुगे
एक सेल्स म्यानेजर राजिव चौधरीले भने अफिसमा काम गर्दै जड केही समय म मेरो बोसको गर्लफ्रेन्ड सँग सल्केको थिँए । म भन्दा पनि बढी बोसकी गर्लफ्रेन्ड म सँग जिस्कन चाहन्थि । एक दिन बोस बाहिर गएको मौका पारी उ मेरो अफिस कोठामा छिरी र म सँग जिस्कन थाली र हामी एकअर्का बिच यती नजिक भयौ कि अफिस मै सेक्स गर्न थाल्यौ । मैले उनलाई टेबलमा राखेर सेक्स गर्दै थिए, टुप्लुक्क बोस आइपुगे । फेरी १ महिना सम्म बोस र मेरो बोलचाल राम्रो भएन, त्यो दिन त खुब गाली खानु पर्‍यो । आखिर ति महिलाले जागिर बाट हात धुनु पर्‍यो ।
चिकित्सकको सल्लाह :आफ्नो बोसको गर्लफ्रेन्ड सँग यस्तो कार्य ? NO WAY ! यदी तपाईं रोमान्च गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो तरिका बिल्कुल गलत हो । किनकी यस्तो कार्यले तपाईंको रेपुटेशन इज्यत मात्र होइन त्यो सस्थाको इज्यत समेत खराव हुन सक्छ । यदी तपाईं आफ्नो बोसको गर्लफ्रेन्ड सँग मोज गर्न चाहनुहुन्छ भने अफिस भन्दा बाहिर कही गएर गर्न सक्नुहुन्छ । तर यो नैकै खतरनाक पनि सावित हुन सक्छ अरुको गर्लफ्रेन्ड एव श्रीमती सँग यस्तो कृयाकलाप नगरनु नै बेस हुन्छ ।